Farmaajo door muuqda & mid qarsoon midna kuma laheen Heshiiska | KEYDMEDIA ONLINE
Farmaajo door muuqda & mid qarsoon midna kuma laheen Heshiiska
Madaxweynaha waqtigiisu dhammaaday ee weli fadhiya Villada, door muuqda iyo mid qarsoon midna kuma laheen heshiiskii Teendhada Afisiyooni ee shalay la gaaray!
MUQDISHO, Soomaaliya - Madaxweynaha waqtigiisu dhammaaday ee Farmaajo ayaa shalay goob joog ka ahaa heshiis uu meelna udhaqaajin waayay intii uu talada lahaa, kaalintii laga rabay inuu kasoo baxo markii uu gabay ayuu dharaar cad Afhayeenkiisii Dubbe ku yiri faafi eed aan sal iyo raad lahayn!
Dhammaan qodobadii la isku hayay ee uu ka socon waayay shirka intii uu talada lahaa Farmaajo, wax tanaasul ahna uu muujin waayay, sharciyaddiina uu baal maray ayuu uleexday waddo muddo kororsi oo uu damac ka galay in uu sii joogo kursiga muddo xileedkiisu ku egyahay afarta sano!
Markii uu runta soo taabtay, beeshii caalamkana ku diidday damacaas, musharraxiintii iyo dowlad goboleedyadiina isku saf ka mareen oo iska diideen ciidamadiina dagaal kala hor yimaadeen falka muddo kororsiga ayuu taladii iyo go'aannadii ku wareejiyay Ra'iisul Wasaarihiisii Rooble.
Qodob kasta ee la isku hayay isagoo ku qasban ayuu aqbalay markii ay Rooble ku wareegtay go'aanka qodobadii muranka keenay, iyadoo waxa la isku hayo ay ahaayeen siyaasad, islamarkaana uu tanaasul muujin karay ayuu ka door biday inuu meesha ka baxo, hoggaamintana ku wareejiyo RW Rooble.
Qodobkii amniga ee muranka adag uu ka taagnaa waxaa lagu caddeeyay heshiiska, waxaana si rasmi ah ula wareegay oo mas'uul looga dhigay Golaha wadatashiga Qaran ee RW iyo madaxda dowlad goboleedyada iyo gobolka Benaadir.
Waxaa la isla gartay in gobolka Gedo oo markiisii horeba ka tirsanaa dowlad goboleedka Jubbaland lagu celiyo gacanta madaxweynihii mayalka adkaa ee diidmada la hor taagnaa afartii sano ee Farmaajo joogay, Hoggaamiye Axmed Madoobe.
Sidoo kale murankii guddiyada doorashada ee gobollada waqooyi kuwaasoo la doonayay in la gacan bidixeeyo oo farta laga saaro Farmaajo saaxiibkiis Mahdi Guuleed ayaa isna xal laga gaaray, waxaana la isla gartay in Guddoomiye Cabdi Xaashi iyo Mahdi Guuleed loo qeybiyo xubnaha guddiga ay matalaaddiisa ku joogaan Muqdisho.
Ugu dambeyntii shirkii Teendhada ayaa guul laga gaaray, iyadoo si weyn loo soo dhaweeyay, goobta shirkana ay ka hadleen madaxweynayaashii hore ee Soonaaliya kuwaasoo Farmaajo uu ku qaaday weerarro, inkastoo goobta munaasabadda la isku cafiyay lana tilmaamay wixii la isku hayay in ay siyaasad ahaayeen oo aysan marnaba jirin colaad shakhsi ah!